विपद्बाट जोगिन अहिले देखी नै सचेत रहौं 2076/08/07 विपद्बाट सप्तरीमा प्रत्येक वर्ष निकै मात्रामा धनको क्षति हुने गरेको छ । चाहे त्यो बाढी होस् वा आगलागि । बाढीबाट हुने क्षति न्युनिकरणकालागि जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी पूर्व तयारी समेत गर्ने गरेको छ । यद्दपी बाढीबाट क्षति ठूलै मात्रामा हुनेगर्दछ । यता आगलागि भनेको प्राकृतिक प्रकोप पनि हो तर, मानविय त्रृटीले पनि सो घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ । यसका लागि दैविक प्रकोप समितिले कुनै तयारी गरेको देखिन्न् । .... विस्तृत
विकासीय कार्यमा सद्भाव र सहयोग आवश्यक 2076/08/07 राजविराज नगरपालिका भित्रका विभिन्न सडकहरु अहिले बिस्तार, कालोपत्रे तथा ढलान हुने कार्य भइरहेको छ । दशकौदेखी विकासको पखाईमा रहेको यस नगरपालिकाका सडकहरु अहिले बिस्तार हुने कार्यलाई सकारात्मक लिनु पर्दछ । विकासको फडको मार्न संघर्षरत रहेको नेपालकै पुरानो नगरपालिका मध्ये एक राजविराज अहिले विकासको गतिमा ढिलो भएपनि अगाडी बढीरहेको छ । .... विस्तृत
विवाद समाधान गरि खेलकुद गतिविधीमा निकायको ध्यान जानु जरुरी 2076/08/07 जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीको कार्यालयमा तालाबन्दी भएको झण्डै सात महिना पुग्नै लाग्यो । तर, सम्बन्धित निकायको तालाबन्दी खोल्न सम्बन्धमा कुनै चासो देखिदैन् । .... विस्तृत
संविधानप्रति असन्तुष्टी कहिले हट्ने ! 2076/06/02 आज नेपालको नयाँ संविधान जारि भएको चार वर्ष पुगेको छ । यद्दपी यी चार वर्षमा संविधानप्रति असन्तुष्टी हट्न सकेको छैन् । अहिले पनि मधेश केन्द्रित दल मध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधानलाई आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन् । आजको दिन सरकारले संविधान दिवसको रुपमा मनाउँदै छ भने संविधानप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै राजपाले कालो दिवसको रुपमा मनाउँदै छ । त्यस्तै अर्को समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस मनाउनेप्रति मौन बसेको छ । यसरी एउटै मुलुकमा एउटै संविधानप्रति तीन थरिका व्यवहारप्रति सत्तापक्ष दलले मनन् गर्नु पर्ने बेला भएको छ । .... विस्तृत
पदीय मर्यादालाई ख्याल गर्दै जनताको भावना अनुरुप काम गर 2076/05/19 तीनै तहका सरकारले अहिले आफ्नो कामकाज तदारुकताका साथ संचालन गरिरहेका छन् । तीनै तहको सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्ष भएको छ । यस अवधीमा सबै भन्दा बढी चर्चा संघ, प्रदेश र स्थानिय मध्ये स्थानिय सरकारको हुने गरेको छ । कीन भने यही सरकार जनताको माँझमा सबै भन्दा बढी रहने गरेको छ । स्थानिय सरकार भनकोे स्थानिय स्तरबाटै आएका जनप्रतिनिधिहरुबाट चल्ने सरकार हो ।.... विस्तृत
कोशीपीडितहरुको समस्याप्रति सरकार गम्भिर हुनु आवश्यक 2076/05/11 कोशीपीडितहरु विगत १२ दिनदेखी रिले अनशनमा बसेका छन् । तीन पुस्ता बितिसक्दा समेत कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा नेपाल भारतबीच बि.स. २०११ सालमा भएको सम्झौता अनुरुप जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरु अनशनमा बस्दा हालसम्म सम्बन्धीत निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिदैन् । सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर विगत लामो समयदेखी संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । ... विस्तृत
स्थानिय तह जिम्मेवार हुनु आवश्यक 2076/05/07 आर्थिक वर्ष सम्पन्न सँगै जिल्लामा भएका विभिन्न विकासीय कार्यको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने कार्य फितलो रहेको छ । विभिन्न स्थानिय तहले गरेका अघिल्लो वर्षको विकासीय कार्यहरुबारे जनतालाई सुसिचिति गराउने कार्यले विगतको जस्तो निरन्तरता पाउन सकेको छैन् । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले आ.व.मा भएका विभिन्न विकासीय कार्यहरुको सरोकारवालाहरुसँग अनुगमन र निरिक्षण गर्दै आएको थियो । .... विस्तृत
अव्यवस्थित घर निर्माण रोक्नु आवश्यक 2076/05/05 मुलुककै पुरानो नगरपालिका मध्ये एक राजविराज नगरपालिकाले अहिले आफ्नो अस्तित्व बचाउनमा संघर्षरत रहेको छ । भारतको गुलावी सहर जयपुरको नक्सामा आधारित यस नगरपालिकामा अहिले अव्यस्थित तरीकाबाट घर निर्माणका साथै, अव्यवस्थित बजार बिस्तार हुनु र सडकहरुमा पशुचौपायाको खुलेआमा रजाइका कारण अव्यवस्थित बन्दै गएको हो । दुई दशकदेखी निर्वाचित प्रतिनिधिबिहीन भएको अवस्थामा बजार अव्यवस्थित बन्दै जाँदा अहिले जनप्रतिनिधी आइसकेको अवस्थामा समेत सुधारको संकेत देख्न सकिएको छैन् ।.... विस्तृत
कक्षा कोठामा विद्यार्थीले मोवाइल बोक्ने कार्यप्रति ध्यान पुगोस् 2076/04/27 अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरुले पढ्ने कक्षा कोठामा मोवाइल बोक्ने गरेका छन् । यो एउटा अहिले जटिल समस्याको रुपमा देखापरेको छ । शिक्षकले पढाइरहेको बेला विद्यार्थीहरुले मोवाइलको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जसकारण शिक्षकले सिकाइरहेका कुराप्रति उनीहरुको ध्यान जादैन् ।.... विस्तृत
छुवाछुत प्रथा उन्मूलन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक 2076/04/26 विभिन्न जात, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका कारण छुवाछुत प्रथा अझै हाम्रो मुलुकमा कायमै रहेको छ । यो प्रथा गरिब, धनी सबै वर्गमा हालसम्म हायमै रहेको छ । छुवाछत गरिने भन्ने कुरालाई अहिले सबै भन्दा बढी धनीले गरिबलाई कुनै न कुनै बहानामा विभेद गरिरहेको देखिन्छ । जुनसुकै जातका गरिब व्यक्ति जुनसुकै जातका धनीबाटै अपहेलित हुँदै आएको सत्यतालाई हामीले स्वीकार्नै पर्दछ । तर, अहिलेको आधुनिक युगमा पनि समाजमा यस्ता भेदभाव हट्न नसक्नु मानसिकताको उपज मात्र हो भन्नुमा कुनै दुइमत नहोला । .... विस्तृत
सडकलाई कुरुप हुनबाट जोगाउन निकायको ध्यान पुगोस् 2076/04/22 सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ जनप्रतिनिहरुको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन् । हाल नगरमा संचालित विभिन्न योजनाहरु अलपत्र रहेका छन् । राजविराजको मुख्य चौक गजेन्द्र चौकवरिपरिका सडक निर्माण अहिले अलपत्रमा परेको छ । .... विस्तृत
धुम्रपान प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा समेत निकाय लाचार बन्दै 2076/04/22 सरकारले हरेक वर्ष ध्रुमपानमा मुल्य बृद्धि गरेपनि त्यसको सेवन गर्नेहरुको कमी हुनुको साटो झनै बृद्धी हुँदै गएको छ । धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भन्ने सबैले यसबारे थाहा हुँदै हुँदा पनि यसको सेवनकर्ता झनै बढेर गएको छ । प्राय यूवा वर्ग यसप्रति निकै आकर्षित हुदैछन् । विद्यालयपछि कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरु धु्रमपान सेवनलाई शौकको रुपमा लिने गर्दछन् । क्याम्पस जानु अघि उनीहरु चुरोट तान्दै जाने गरेको प्रसशस्त रुपमा देखिन्छन् । .... विस्तृत
किसानहरुको समस्याप्रति निकाय निरिह 2076/04/20 सप्तरीमा हरेक वर्ष खेती गर्ने समयमा किसानहरुले विभिन्न समस्यासँगै जुद्धनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । खेती गर्ने समयमा किसानहरुले आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ भने जसोतसो खेती गरेपछि उत्पादनलाई बढाउन मलखादको समस्या समेत झेल्नु परिरहेको छ । .... विस्तृत
सप्तरीलाई “कृषि हव” को रुपमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक 2076/04/19 सप्तरी जिल्ला आर्थिक श्रोतले धनी नभएपनि यहाँको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मुलुकको एउटा अन्न भण्डारको रुपमा पुनः सबल हुने देखिन्छ । दुई दशकअघि यस जिल्लालाई अन्न भण्डारको रुपमा चिनिने गरिन्थ्यो । .... विस्तृत
बिजुली बत्तिमा पनि ... 2076/04/18 राजविराजमा नगरमा सोलार बत्ति जडान गरिएको झण्डै चार वर्ष भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा बढ्दो लोडसेडिङका कारण नगरवासी अध्यारोमा बस्न बाध्य भइरहेकोले नगरको विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सोलार लाइट जडन गरिएको थियो । जडान गरिएका सेलार लाइट साँझ हुने बित्तिकै आफै बल्ने तथा बिहान उज्यालो हुने बितिक्कै आफै निभ्ने गरेकोले यसका लागि कुनै स्विच प्रयोग छैन् । तर, सोलार बत्ति लगाएकै समयदेखी थोरै थोरै बिग्रिने क्रम सुरु भएपछि अहिले अधिकांश स्थानको सोलार बत्ति कामै नलाग्ने भएको छ । .... विस्तृत
जनप्रतिनिधि स्वार्थको भावना त्यागेर जनता सेवामा समर्पित होऊ 2076/04/16 मुलुकमा स्थायी सरकार निर्माण हुनुका साथै तीनै तहको सरकारले आफ्नो कामकाज सुरु गरेपछि जनताले विकासको अनुभूति पाउने उपेक्षा गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तीनै तहको सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानिय मध्ये स्थानिय सरकारसँग जनताले निकै अपेक्षा गरेको छ । तर, अहिले सबै भन्दा बढी बेखबर र दायित्वहिन स्थानिय सरकार नै भएको छ ।.... विस्तृत